Ifomathi yedatha engaziwayo
Ikhaya iimveliso DataNumen Access Repair Ifomathi yedatha engaziwayo
Ulwazi oluneenkcukacha malunga "nefomathi yedatha engaziwayo" Impazamo
Xa usebenzisa iMicrosoft Access ukuvula isiseko sedatha yokuFikelela, ubona lo myalezo wemposiso ulandelayo:
Ifomathi yedatha engaziwayo 'igama lefayile.mdb'.
apho 'filename.mdb' yifayile yedatha yokuFikelela eyonakeleyo eya kuvulwa.
Apha ngezantsi kukho isampuli yekrini:
Le mpazamo yeMicrosoft Jet kunye ne-DAO kwaye ikhowudi yempazamo ngu-3343.
Kwifayile ye-MDB, idatha igcinwa njengamaphepha aqhubekayo kunye nobungakanani obumiselweyo. Iphepha lokuqala, elibizwa njengephepha lenkcazo ledatha, liqulathe i most iinkcazo ezibalulekileyo kwiziko ledatha.
Ukuba ubume bephepha kwifayile ye-MDB bonakele, umzekelo, ii-byte ezininzi entlokweni yefayile zi-lost ngokusisigxina, UkuFikelela akuyi kuba nakho ukuqaphela amaphepha akule fayile kwaye bayakuxela lempazamo.
Ukuba iphepha lenkcazo ledatha okanye enye idatha ebalulekileyo yonakele, ukuFikelela akunakuyibona ifomathi yedatha kwaye kuya kuthi kunikwe ingxelo ngempazamo.
Ngelizwi, ukuba iMicrosoft Access ayinakho ukuyamkela ifayile ye-MDB njengesiseko sedatha sokuFikelela, iya kuthi inike ingxelo ngale mpazamo.
Isampulu ifayile ye-MDB eyonakeleyo eya kuthi ibangele impazamo. mfayile_1
Ifayile elungiswe ngu DataNumen Access Repair: mydb_1_ zilungiswe.mdb (Itheyibhile 'Ebuyiselweyo_Table2' kwifayile emiselweyo ehambelana netafile 'yabasebenzi' kwifayile engekonakali)
IJet yeMicrosoft Jet kunye neempazamo zeDAO
Ifomathi yedatha engaziwayo. (Impazamo 3343)